Brownfields Ku Noqoshada Sanduuqa Amaahda - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Brownfields Ku Noqoshada Sanduuqa Amaahda
Waaxda Ganacsiga ee 'Brownfields Revolving Loan Fund' (BRLF) waxay ka caawisaa dawladaha hoose iyo kuwa gobolka, hay'adaha aan macaash doonka ahayn iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay nadiifinta iyo dib-u-horumarinta goobaha Brownfields. Goobaha Brownfields waa guryo loo isticmaali jiray ujeedooyin warshadeed, laakiin waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo ka hor intaysan mar kale taageerin ganacsiyada oo ay shaqo u abuuraan.
Waa maalgashi adag. $ 1 kasta oo gobolka ku qarash gareeyay nadiifinta goobaha Brownfields, waxay ka soo saartay $ 12 dakhliga canshuuraha maxalliga ah iyo kan gobolka, $ 14 qiimaha mushahar bixinta, iyo $ 64 dakhliga ganacsiga.
Albaab laga gaaro Dib u Hormarinta Warshadaha
Si loo maareeyo mashaariicda Brownfields ee gobolka oo dhan, Waaxda Ganacsiga waxay adeegsatay deeq ka timid Hay'adda Ilaalinta Deegaanka. Waaxda Cilmiga Ecology waxay ku bixisaa adeegyada xirfadaheeda deegaanka ee aqoonta u leh barnaamijkeeda Nadaafadda Tabaruc
Shirka Gobolka Brownfields Washington
Nagala soo qaybgal Shirka Washington Brownfields ee Spokane May 29th - May 30th. Nadiifinta iyo dib u horumarinta koofiyadaha buniga ah ayaa fure u ah dadaalka horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah, iyadoo loo beddelayo dhibaatooyinka la dareemayo hantida bulshada, sida guryaha la awoodi karo Ujeeddada shirkan waa in la isugu keeno daneeyayaasha waaxda dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Washington iyo Woqooyi-Galbeed Inland si ay ula wadaagaan macluumaadka ku saabsan guulaha dib-u-kobcinta brownfields iyo fursadaha mustaqbalka.
Taariikh ahaan, goobta “Rainier Court III” ee Koonfurta Seattle waxaa loo isticmaalay adeegsiga warshadaha, keydinta rinjiga, dayactirka gawaarida iyo badbaadinta iyo qashin qubka sharci darrada ah. Iyadoo la adeegsanayo in ka badan $ 472,102 ee Brownfields Revolving Loan Funds (BRLF), SouthEast Effective Development (SEED) ayaa nadiifisay maaddooyinka halista ah ee yaal goobta mashruuca. Wejiga saddexaad ee mashruuca dib-u-dhiska, Columbia Gardens ee maxkamadda Rainier, ayaa lagu daray 70 qaybood oo cusub oo loogu talagalay waayeelka dakhligoodu hooseeyo. Mashruucu wuxuu shaqaaleysiiyay 150 qof waxayna ku baxday 13 milyan oo doolar.
Brownfields Codsiga & Foomamka
Tilmaamaha Milkiilayaasha Hantida
Wada-hawlgalayaasha Gobolka Washington
Waaxda Ecology ee Washington
Degmada King / Magaalada Seattle
Sheekooyin Guul Badan ...
Laga soo bilaabo 1931 ilaa 1977 goobta mashruucu ahaa Village Cove waxay ahayd meherad dhar dhaqid iyo nadiifin oo leh haamo dhulka hoostiisa ah oo loogu talagalay saliida shidaalkeeda iyo dareerayaasha nadiifinta. Mashruuca 'Village Cove' waxaa ku jira boos jaaliyadeed oo ku yaal dabaqa koowaad iyo 28 guri oo dabaqyada sare ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah. Xarunta ayaa ku kacday ku dhowaad $ 15.1 milyan waxaana soo saaray 106 shaqooyin dhismaha ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Village Cove…
Claremont waa horumar adeegsi isku dhafan oo leh tafaariiqda, xafiiska, iyo guryaha kirada ah. Waxay la kulantaa heerka cagaaran iyo tamarta. Waxay leedahay beer saqaf ah. Claremont waxay bixisaa 58 qaybo ijaar oo dakhli isku dhafan ah oo leh 10 guri-magaalo. Dabaqa koowaad wuxuu bixiyaa qiyaastii 6,000 oo fiit oo laba jibbaaran oo tafaariiq iyo ganacsi ah. Goobtu waxay u ahaan jirtay xarun shidaal hore iyo garaash gawaarida muddo ku dhow 40 sano ka dibna waxay noqotay Chubby & Tubby
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan The Claremont…
Magaalada Palouse waxay adeegsaneysaa $ 276,520 $ oo laga helo Barnaamijka Maalgelinta Amaahda ee Brownfields oo lagu nadiifiyo wasakhda iyo halista jirka, loona diyaariyo boggan dib-u-horumarinta. Goobtu waxay noqon doontaa mid soo jiidasho leh adeegyo ganacsi oo kala duwan iyo / ama guryo waayeel ah. Kaliya maahan goobta ku taal qarka webiga Palouse, laakiin waxay ku xigtaa rugta caafimaadka Palouse ee dhowaan la dayactiray.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Soosaarayaasha Palouse…
Phone: (360) 878-1498